Fadhigii Golaha Wakiiladda Somaliland Oo Sawaxan Iyo Buuq Hadheeyay Kadib Markii Shirgudoonku Soo Jeediyay In Ajandaha Laga Saaro Xeerka Furashada Ururada Siyaasada | Araweelo News Network (Archive) -
Fadhigii Golaha Wakiiladda Somaliland Oo Sawaxan Iyo Buuq Hadheeyay Kadib Markii Shirgudoonku Soo Jeediyay In Ajandaha Laga Saaro Xeerka Furashada Ururada Siyaasada
Hargeysa (ANN) Kalfadhigii 13aad ee golaha wakiiladda Somaliland oo todobaadkii hore si rasmi ah uga furmay hoolka sare ee dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa noqday mid ay hadheeyaan sawaxan iyo buuq qaradar kooban ka taagnaa madasha. Kadib markii
mudanayaashu isku maan dhaafeen soo jeedinta hadal uu madasha ka jeediyay gudoomiyaha golaha C/raxmaan Maxamed C/llaahi (Ciro) oo ahaa in Ajandaha laga saaro Xeer No, 14 oo ka hadlaya furashada Ururada siyaasadeed.
Qodobada oo ka kooban yahay Ajanduhu oo ay mudanayaashu maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen sidii wax loogu kordhin lahaa, ama wax looga saari lahaa ayaa mar keliya waxa madashii Golaha ka aloosmay buuq iyo sawaxan, ka dib markii shirguddoonku sheegay inay ka saareen ajandaha qodobka xeer No, 14 ee la xidhiidha in dib u eegis lagu sameeyo furista ururada Siyaasada.
Fadhigii maanta oo ay kasoo xaadireen 46 mudane, wuxuu Guddoomiyaha Golaha Wakiilada C/raxmaan Cirro, oo furitaankii hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay inay xukuumada cusubi u soo jeedisay inay Aqalka Wakiilada u soo gudbinayaan heshiisyada ay la galaan shirkadaha iyo dawladaha shisheeye, si ay u xalaaleeyaan sharcinimadooda.
Hase yeeshee Guddoomiyuhu wuxuu mudaneyaasha ku wargeliyay in soo jeedintii ku saabsanayd dib u eegista furista ururada siyaasadu tahay qadiyad qaran oo u baahan in wada jir looga arrinsado, sidaa darteed ay go’aamiyeen in ajandaha kal-fadhigan laga saaro. Laakiin markii ay weedhahaasi kasoo baxeen gudoomiyaha waxa fadhigii hadheeyay buuq iyo sawaxan socday muddo, waxaana mudaneyaal badani ay Guddoomiyaha culays ku saareen inuu ku darro ajandaha qodobka dib u eegista xeer No:14 oo ah xeerka furashada ururada siyaasada. Taasi oo khasab kaga dhigtay shirgudoonka inaan ajandaha laga saarin xeerkaa.
Markaa kadib waxa duuduub loogu codeeyay ajandahaa in sidaa lagu ansixiyo gebi ahaanba ajandaha, iyadoo 38 Xildhibaan ogolaaday ajandaha buuqu ka dhashay ee kalfadhiga 13-aad ee Golaha Wakiilada, 6 Mudane ayaa ka aamusay, cid diiday may jirin, guddoomiyuhuna muu codayn. Sidaana waxa ku ansaxay ajandihii horyaalay golaha ee kalfadhiga 13aad.